Home News Kooxda Shabaab oo la wareegtay seddex tuulo oo hoos timaada Balcad &...
Kooxda Shabaab oo la wareegtay seddex tuulo oo hoos timaada Balcad & qax ka bilowday Balcad
Degmada Balcad oo soddon (30km) u jirta magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka bilowday qax kaddib markii ay ururka Al Shabaab ay la wareegeen seddex tuulo oo hoos tagta degamada Balcad. Wararka aan ka heleyno degmada Balcad ee duleedka magaalada Muqdisho, ayaa waxa ay sheegayaan in deegaano hoos yimaada Degmadaas ay la Wareegeen dagaalyahano ka tirsan Al Shabaab.
Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay la wareegeen deegaanada lagu magacaabo Yaaqle, Dhagaxow, Kooreebe iyo tuulooyin kale,halkaasi oo ay Ciidamada dowlada Soomaaliya ay ku lahaayeen saldhigyo.
Dad ku sugan Balcad ayaa waxa ay sheegeen in Ciidamadii dowladda ee ku sugnaa deegaanada maanta Al-Shabaab ay Wareegeen ay isaga baxeen, isla markaana ay u soo ruqaan sadeen dhanka Degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha dhexe.
Sidoo kale waxaa la sheegay in shabaab ay goob fagaaro ah ay isugu keeneen dadkii ku noolaa deegaanada ay gacanta ku dhigeen,isla markaana khudbad u jeediyay.
Dhinaca kale Degmada Balacd ayaa waxaa ka socda abaabul dagaal oo dhanka al shabaabkii la wareegay deegaanada hoos yimaada degmadaas.
Maamulka degmada Balcad iyo kan Gobolka Shabeellaha Dhexe weli kama hadlin la wareegitaanka Al-Shabaab ee deegaano ka tirsan Shabeellaha dhexe.
Previous articleMaxeey Tahay Sababta Dowladu u Siyaasadeeysay Dilkii Marxuum Axmed Dowle,Yaasa ku lug leh
Next articleAwoodda kooxda Daacish oo kusii kordheysa magaalada Muqdisho (Warbixin)
Safirka Qatar ee Somaliya oo xalay gurigiisa ku qaabilay MW Waare...